व्यायामको माध्यमबाट सोरी स्कीइंग मासुहरू कसरी मिलाउनुहोस्
सागर स्कीइंग मांसपेशिहरु कसरी तय गर्ने
by माइक ड्योल
प्रत्येक स्की सिजनको सुरुमा, यो धेरै धेरै दिइएको छ कि लगभग सबै स्किर्सहरू स्फूर्ति हुनेछन् र पहिलो दिनको दौडान घाँटीको मासुको मासु खाँदै हुनेछन्।
किन लेग मांसपेशिहरु अनुहार प्राप्त गर्छन
कुनै फर्किएन हामी कति चलिरहेको छौँ, वा कति धेरै स्क्वाट्स र फेफडाहरू प्रायः हामी सबैका ज्वरोहरू जलिरहेका छौ। किन यस्तो? वर्षौंको दौडान मैले मुख्य अपराधीहरू दुइवटा कारण पाएको छु।
पहिलो, स्कीइंगले हामीलाई कन्सर्टमा ठूला र सानो मांसपेशियों को उपयोग गर्न को लागि बल गर्छन र हामी सजिलै संग गर्मी को मांसपेशी को उपयोग डुप्लिकेट नहीं गर्छन।
दोस्रो, प्रारम्भिक सीजनमा निहित स्कीइंग फारमको ढाँचा हो, जो गहिरो मांसपेशिहरु र अझै पनि स्की रमाइलो गर्ने प्रयास गरेर उत्साहित हुन्छ।
दोस्रो कारणलाई सम्बोधन गर्दै - फारममा ढोकापन - पारंपरिक छुट्टी परिवार स्की छुट्टी को माध्यम ले यसलाई बनाउन को लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। यो एक गन्तव्य स्की छुट्टी वा एक सप्ताहांतको घरमा घर-नजिक नजिक हुन त्यहाँ ती चिल्ला जांघहरू चुस्त मदत गर्न तरिकाहरू छन्।
मेरो मनपर्ने मन्त्रहरु मध्ये एक - एक पाठ लिनुहोस् - तपाईंको छुट्टै वा तपाइँको पहिलो स्की दिनको दिन एक दिनको लागी संशोधन गर्न परिमार्जित यदि तपाईं घर नजिकको स्कीइङ हुनुहुन्छ। एक समूहको पाठ ठीक छ केवल एक प्रशिक्षकको अगाडि तपाइँको डेनिस वन राख्नुहोस्।
पहिलो दस मिनेटभित्र, प्रशिक्षकले तपाईंलाई सबै प्रमुख वा अल्पसंख्यक दोषहरू बताउनेछ जुन तपाइँसँग अन्तिम सिजनको अन्त्यमा छैन तर अहिले त्यहाँ छन्।
प्रशिक्षकले चीजहरू उठाए जस्तै - तपाईं पछाडीको सिटमा हुनुहुन्छ, तपाईंको हातहरू तपाईंको पछि, आदि छन्।
र त्यसपछि तपाईं सही फारम मार्फत चलाउनुहुन्छ। यो, जब तपाईं सही स्कीइ गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि तनाव वा अनावश्यक बलहरू हटाउनुहोस् जुन तपाइँले एक विशेष मांसपेशीमा भरोसा राख्नुपर्दछ।
क्रश कि बग
मलाई मालिक माइक बीउडसेटसँग स्कीइङ सम्झन्छ, र फ्रान्सेली र पीएसए प्रमाणित प्रशिक्षक मञ्च, फ्रान्समा स्की प्रो मेग्वेमा।
माइकले आफ्ना सबै विद्यार्थीहरूलाई "तपाईंको स्की बोट भाषाको पछि लाग्ने बगलाई क्रश गर्न" भन्थे। "
यो माइकको सुन्नको लागी एकदम धेरै गीतकारले फ्रान्सेली भाषामा बोल्छन्, तर यो सिद्धान्त तपाईंको जूतामा राखिन्छ। स्की ब्वाइजहरू एक कडा प्लास्टिकको बनाइएका छन् त्यसैले तपाई जिब्रोमा दबाब राख्नुहुन्छ र तपाईलाई दबाब पनि दिन सक्नुहुन्छ - एक विद्रोह प्रभाव।
जब तपाईं ब्वाइज र स्कीइङमा झुकाइरहनुहुन्छ, यो तनाव तपाईंको हड्डीहरूमा र धेरै टाँसेको छैन। अब तपाईं आफ्नो बूट भाषाहरु मा दबाव राखन लामो समय सम्म तपाईं आफैलाई स्किइङ बिना अचानक क्वाड को बिना जब तपाईं एक टक्कर सवारी बिना स्किइङ्ग पाउनुहुनेछ।
प्रत्येक सत्रको शुरुवातमा पहिलो दिनको दौडान, जब पनि मैले मेरो जाँ मांसपेशिहरु मा पहिलो तनाव महसुस गर्छु मलाई लाग्छ "क्रश कि बग, क्रश कि बग" र निश्चित छ कि म फेरि मेरो बूट भाषाहरूमा झुकाइरहेको छु। र कुनै पीडा महसुस हुँदैन।
स्की सिजन मांसपेशिहरु कसरत
हामीले शुरुवात स्की सिजनको बारेमा कुरा गरिरहनु भएकोले तपाई अफ-सीजनमा के गर्नुभएन भने प्रासंगिक छैन। तथापि, एक राम्रो तरिकाले एक मौसम को समयमा पैर मांसपेशी को काम प्रतिरोध प्रतिरोध बैंड प्रशिक्षण संग छ।
बाग धेरै विमानहरुमा चर प्रतिरोध प्रदान गर्दछ - यो छ - हामी खींचो या धक्का र बैंड थोडा दूरी को केन्द्र को प्रतिक्रिया को रूप मा प्रतिक्रिया दिछन किनकी हामी थोडा मांसपेशियों लाई आगो को रूप मा धक्का दिए र ठूलो मान्छे संग खींचते हो।
मैले प्रतिरोधका डेव शमिटजलाई सोधेकी थिइन। डेभ एक फिटनेस विशेषज्ञ हो र उनको विशेषता बल, लचीलापन, सन्तुलन र सामान्य भलाईको लागि प्रतिरोध ब्यान्ड प्रशिक्षण हो। डेभले हामीलाई स्की-विशिष्ट प्रतिरोध ब्यान्ड प्रशिक्षण भिडियो प्रदान गरेको छ।
विशेष गरी, मैले डेवको उल्लेख गरे कि, स्की मौसममा प्रारम्भिक, मैले विस्टस मेडियलिस, VMO वा 'मोती मांसपेशी' सबै भन्दा कष्टप्रदमा सतावट पाउँछु। VMO माथिल्लो भित्र हो, र घुटने माथि मात्र र यो पक्का जलाउन सक्छ।
डेभ स्किट्जले मलाई बताए "... VMO सतावट अक्सर ग्लुट्स बन्द गर्ने परिणाम हो र मध्यकालीन क्वाड अतिभारित हुन्छ।" यो अर्थ बनाउँछ, विशेष गरी सीजनमा चाँडो जब हामी आफैंलाई हाम्रो पातहरूमा अगाडी झुकाएर छिमेकीहरूमा अधिक झुक्यो।
डेभले मलाई प्रतिरोधी बिरुवाको पैदल र ग्लुट व्यायाम भिडियोमा संकेत गर्यो जुन सजिलै वर्षको दौडमा गर्न सकिन्छ।
यो सीजनको समयमा प्रयोग गर्न ठूलो कसरत हो किनकि यसले मांसपेशिहरु काम गर्दछ जुन हामी वास्तवमा स्की को प्रयोग गर्दैछौं र तपाईलाई आवश्यक पर्दछ एक प्रतिरोध ब्यान्ड र सानो गतिशील स्टेटिअलाइजर हो, दुवै सजिलै यात्रा यात्रामा फेंकिएको छ।
अफ-सीजन स्की फिटनेस
यहाँ अफसोसन को लागि थोडा सल्लाह हो जुन प्रारम्भिक सिजन घडी मांसपेशियों को रोकन मा मदद गर्न सक्छ। जस्तो कि मैले पहिले भने, अफिसमा स्कीइंग को नकर्न गर्न को लागी औसत स्किअर गर्न सक्दैन। मलाई स्की आकारमा रहन गम्भीर व्यक्तिको लागि उत्तम दिनचर्या लाग्छ, र हॉकी खेल्न मनपर्छ, गर्मीको हॉकी लीगमा सहभागी हुन्छ।
मैले धेरै गर्मीको हॉकी खेलाडीहरूलाई चिनिदिएँ जुन आक्रामक रूपमा र दिनदिनै दुखाइबाट ढोका खोलेर। स्कीइङका लागि सबै ठूला र सानो छिटो छिटो र ढिलो घुमाईको मासुपेशी प्रयोगमा छन् र प्रतिस्पर्धी गर्मीको हॉकी खेल्दा फ्लेक्स गरिन्छ।
निस्सन्देह, अफिसमा फिट रहन सर्वोत्तम छ, तर सम्झनुहोस् - पहिलो दिन अर्को सिजनमा र पहिलो क्रिङ्मा - कि कुचलाई कुच्याउनुहोस्।
कसरी एक जोडी स्केटिङ वा आइस डान्स पार्टनर पत्ता लगाउन
स्ट्रिंग यो बाहिर गोल्फ गेम
ओलम्पिक खेल इतिहास
क्र्याम्पन्सको बारेमा सबै
6 कारण जिमनास्टिक सबै भन्दा बलियो खेल छ
नियम2- मिलान प्ले (गोल्फ नियमहरु)
गोल्फमा रूपान्तरण शुल्कहरू
आइस स्केटिङको लागि मनपर्ने संगीत
नियम 9: स्ट्रोक टेकको रूपमा सूचना (द गोल्ड्स गोल्फ)
नियम 20: लिफ्टिंग, छोड्ने र राख्ने; गलत स्थानबाट खेल्दै
'नाइस' मा 'एलिस' को को हुन्? जाऊँ सोध्नुहोस्
रेडियो सक्रिय ट्रेक्टर परिभाषा
आतंकवादहरूले प्रयोग गरेको हतियार र रणनीति
गार्डेन ईडन: बाइबल स्टोरेज सारांश
GRE बनाम GMAT: ए हेड-टु-हेड तुलना
कलेजबाट खारेज गरियो? एक व्यक्ति अपीलका लागि सुझावहरू
कालो होलले स्टार गठनलाई खतरा पार्छ
एम्बिथ क्यूट्स को बारे मा एम्बेशन
रिपब्लिकन राजनीतिको 11 औं आज्ञा
पहिलो र तेस्रो क्वार्टिल्स के हो?
क्यानाडा यसको नाम कसरी भयो
ट्विटरमा पछ्याउन शीर्ष 20 कन्जर्वेटिभहरू
2011 फोर्ड मस्तंग टट्टू प्याकेज
युएस वरिष्ठ महिला ओपन, गोल्फको नयाँ म्याग च्याम्पियनसिप
बतख बिल डिनोसaur चित्र र प्रोफाईलहरू
उहू! एक थिएटर हार्म अप
मधुमक्खी कसरी बचाउन सकिन्छ
बोसो प्राप्त नगरी बल्किंगको लागी शरीर निर्माण गर्ने उपाय
आर्थोडक्स ईस्टर मितिहरू
विक्टर होगो द्वारा हाउचबिट नोरे-डेम (1831)
रक इतिहास बनाएको महिला महिला स्टार
Dilophosaurus को बारे मा 10 तथ्य
फ्रांसीसी शब्द 'जोइन्ड्रे' ('सामेल हुन')
यूसी मर्सेड प्रवेश
8 सृष्टििय विज्ञान विज्ञान प्रयोग